घर बहीखाता सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: गृह लेखांकन
मिटरमा कसरी गिन्नुको लागी ग्यासको लागि कति पैसा तिर्न सकिन्छ? यो 6.492 थियो, अब 7.777।
मिटरमा ग्यासको कति तिर्ने भन्ने हिसाब कसरी गर्ने? यो .6.492..7.7777२ थियो, अब 6। तपाईंले अ gas्कलाई गन्तीको लागि दशमलव अ after्क पछि गणना गर्न आवश्यक पर्दैन, तपाईंले एउटा घन (get--XNUMX) पाउनुहुनेछ, त्यो हो ...
कम गुणवत्ता गुणस्तरमा दावी र हात कसरी लेख्न सकिन्छ?
कसरी दाबी सही तरिकाले लेख्ने र कम-गुणको जुत्ता फिर्ता गर्ने? Riskover.ru वेबसाइटमा, "परिस्थितिहरूमा कार्यहरू" सेक्सनमा, तपाईं स्वचालित रूपमा एक कम-गुणवत्ता उत्पादनको विक्रेता बिरुद्ध दावीको पाठ र दावीको पाठ उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ।
दुई-टरिफ काउन्टरको पढाइ गणना गर्नुहोस्
दुई-ट्यारिफ मिटरको पठन गणना गर्नुहोस् यो उपभोक्ताको बिजुली मिटरिंगको लागि आधुनिक उपकरण हो। एक विशेषता विशेषता निर्धारित गर्न सकिन्छ कि, यसको अपरेशनको सिद्धान्त अनुसार, बिजुली उपभोक्ताहरूले बिजुलीको लागि तिर्ने जब दुई ...
नमस्ते !! ! मलाई चिन्नुहोस्! अब छोराछोरीले कति पैसा तिर्छन्?2सालको बच्चा !! ! मैले सुनेँ कि तिनीहरूले उठे! यो 750 थियो
नमस्कार !! ! मलाई pliz बताउनुहोस्! बच्चा सुविधाहरू अब कति तिर्ने? बच्चा २ बर्षको भयो !! ! मैले सुने कि उनीहरू प्रचारित भए! त्यहाँ मस्को र मस्को क्षेत्रमा 2० फरक नम्बरहरू थिए, तर मैले सुने कि उनीहरूले मस्कोमा कम तिर्ने ...
Rostelecom ले सदस्यता शुल्क को बिना शुल्क दिए
रोस्टेकमले मासिक शुल्क बिना ट्यारिफ दिए, मैले यसबारे सुनेको छैन। शुल्क र सेवाहरूको बारेमा पढ्नुहोस् ROSTELECOM वेबसाइटमा नै। ट्यारिफ योजना "होम २०१ 2015"। ग्राहक लाइनका लागि शुल्कहरू सञ्चालन हुँदैनन्, तिनीहरू चार्ज हुन्छन् ...
तपाईंको पाक घर व्यवसाय कसरी सुरु गर्ने?
तपाइँको पाक घर व्यवसाय कसरी सुरू गर्ने? अनुरोधमा उत्सवहरूको लागि भाँडा उत्पादनको लागि अर्डर स्वीकार गरेर सुरू गर्नुहोस्। दुर्भाग्यवस, एउटा चाहना पर्याप्त छैन। सुरू गर्नका लागि, तपाईं विभिन्न फोरमहरूमा भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ ...
कसलाई डबल बिजुली मीटर छ, मलाई भन्नुहोस्, रातको समय कहिले सुरु हुन्छ? वशर-डिशवाशर कहिले कहिले?
कोसँग बिजुलीको लागि डबल मिटर छ, मलाई भन्नुहोस् रात कहिले सुरु हुन्छ? डिशवाशर कहिले खोल्ने? म सँधै २२:०० पछि सक्रिय गर्दछु तर रातको समय २ 22-०० देखि --०० सम्म हुन्छ !!! २h घण्टाबाट ...
तीन-टरिफ बिजुली मीटर
तीन-ट्यारिफ बिजुली मीटर त्यहाँ २०० meter देखि एक मीटर छ। यो ११ बर्षको छ। दिनको क्षेत्र (२--०० देखि ०---०० सम्म) चोटी (०--०० देखि १०-०० सम्म) एक ट्यारिफ प्रयोग गरी बहु-ट्यारिफ मिटरिंग।
नयाँ प्रस्थानमा। को लागि केहि असम्पीबल HWS-lines मा एक, DHW लाई एक रोशनी पनि। र गन्ती-मानक पनि। कसलाई थाहा छ
नयाँ सुटमा। त्यहाँ भाँडाको लागि धेरै बुझ्न नसकिने लाइनहरू छन् - एकलाई चिसो पानी आपूर्ति, एकलाई तातो पानी आपूर्ति र एक लाईट पनि। र स्तम्भ-नर्म पनि। कसलाई थाँहा छ? मानक - ताकि उनीहरूले थाहा पाउँदछ कि मिटरले प्रमाणिकरण अवधि कहिले अन्त गर्दछ ...
कसरी घरमा पानी सुरक्षित गर्ने?
घरमा घरमा कसरी पानी बचाउने? परियोजना खरीदको निर्णयले ब्लक वाटर सेभिंग लि link्क खण्डन यदि त्यहाँ मिटरहरू छैन भने यो व्यर्थ छ। र काउन्टरहरूको साथ, अधिक चिसो प्रयोग गर्नुहोस्, किनकि यो सस्तो छ। तपाईंलाई स्नानको बारेमा ...
मस्कोमा सस्तो किराने सुपरमार्केट के हो
मास्को कोपेक र प्यारोरोकामा सस्तो किराना सुपरमार्केट के हो? त्यहाँ मूल्य तय गर्नुहोस् सबै कुरा ru 35 रूबल हो! रातो र कालो क्याभियार - वास्तविक नभए पनि) मेगा सेतो डाचामा ...
मलाई पारिवारिक रचनाको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक छ। मलाई यस कागजातको लागि के चाहिन्छ?
मैले परिवार रचनाको प्रमाणपत्र लिन आवश्यक छ। यसका लागि कुन कागजातहरू आवश्यक छन्? घरेलु पुस्तक, राहदानी वा जन्म प्रमाणपत्रहरू, यदि व्यक्तिगत खाताको प्रतिलिपि - तिनीहरूलाई अपार्टमेन्टको लागि कागजातहरू आवश्यक पर्दछ ... राहदानी अधिकारी द्वारा दिएका ...
मैले एसबरबैंक कार्डको पिन कोड बिर्सें! के गर्ने?
Sberbank कार्डको पिन कोड बिर्सनुभयो! के गर्ने? २०१ 2013 देखि SB ले प्रिइनस्टल पिन कोड बिना कार्ड जारी गरिरहेको छ। तपाईंले आफैंलाई स्थापना गर्नुभयो, त्यो हो, यो खाम सायद त्यहाँ थिएन। पिन-कोड अंकहरूको रिकभरी, ...
LMS XL XXL र अन्य पदोन्नतिको आकार कस्तो छ?
LMS XL XXL र अन्य पदनाम कुन आकारको छ? लगभग यो xs42, s44, m46, l48, xl50, xxl52 जस्तो देखिन्छ ... जीन्स आकारका लागि सबैभन्दा साधारण पदनाम प्रणाली यूरोपीयन हो। ट्यागमा ...
कसरी पानी मिटरको सही पढाइहरू लिनु हुन्छ? पहिलो पाँच नम्बर कालो हुन्, अन्तिम तीन रातो हो
कसरी पानी मीटरको सही पढाई लिन? तिनीहरूमा पहिलो पाँच अंक कालो, अन्तिम तीन रातो होलो! मलाई काउन्टरबाट--अँध्यारो नम्बर कालो नम्बरहरू पढाइ पढी पढ्ने गरीरहेछ ...
कसरी बिजुलीको लागि ऋण पत्ता लगाउने?
बिजुलीका लागि debtण कसरी पत्ता लगाउने? तिनीहरू सधैं रसिदमा लेख्छन्। त्यहाँ। नयाँ रसिदको साथ एक खाममा पठाउनुहोस्। मस्कोमा प्रत्येक जिल्लाको आ-आफ्नै नम्बर हुन्छ। तिनीहरू खामहरूमा लेख्छन्। वा 09 लाई कल गर्नुहोस्। र ...
जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कुन कागजातहरू आवश्यक छ ... जन्म प्रमाणपत्र ...
कुन कागजातहरू आवाश्यक हुन्छन् .. एउटा जन्म प्रमाणपत्र ... एक जन्म प्रमाणपत्र .. जसको प्रमाणपत्र त्यो हो ??? अस्पतालबाट प्रमाणपत्र, आमा बुबाको पासपोर्ट र अस्पतालबाट विवाह प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र, आमा-बुबाको पासपोर्ट, सेन्ट
पानीमा मिटर रीडिंग कसरी गणना गर्ने। मलाई बताउनुहोस् कि कसरी पानीको प्रवाह गणना गर्न सबैको लागि सही रूपमा भुक्तान गर्न
कसरी पानी को लागी मिटर रीडिंग पढ्न। हामीलाई भन्नुहोस् कसरी पानीको खपत गणना गर्न सबै कुरा ठीकसँग तिर्नका लागि मीटर लिटरमा गणना हुन्छ। १००० लिटर -१ घन मीटर। ठिक छ, उदाहरण को लागी, म यो लाग्छ: म तल लेख्छु ...
55 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,432 प्रश्नहरू।